Ubuntu 32 တွင် ESET NOD11.04 ကို install လုပ်ရာတွင်ပြနာ Linux မှ
ch3gt | | GNU / Linux များ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
ငါဖြစ်ရပ်အနည်းငယ်မြင်ကြပြီ, ဒါပေမယ့်တချို့အသုံးပြုသူများကို installing ပြproblemsနာများရှိခဲ့သည် ESET NOD ၃၂ အချို့ဗားရှင်းများတွင် Ubuntu ကို 11.04 နောက်ပိုင်းတွင်။
ဒါကြောင့်ပေးသောဘုံအမှားဖြစ်ပါတယ် "ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါဖိုင်များ (သို့) packages များထည့်သွင်းပါ။ /usr/lib/gconv/UTF-16.so"
ဒီ "ပြproblemနာ" ကိုဖြေရှင်းရန်သင်လမ်းညွှန်မှ link တစ်ခုဖန်တီးရမည် "/ Usr / lib / gconv" ညွှန်ပြ "/Usr/lib/gconv/UTF-16.so" ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကတည်းကကတည်းက Ubuntu ကို မတည်ရှိပါဘူး။ ကျနော်တို့ terminal ကိုသွားနှင့်နေရာ:
ကောင်းပြီ၊ မင်းကကူညီပေးမယ်၊ နောင်တရတာထက်ကြိုတင်သတိပေးတာကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာမှတ်မိတယ်။
အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်၊ အဲဒါကကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးပို့စ်ပဲ။ မင်းဟာမင်းခွင့်ပြုချက်ရဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » Uet Ubuntu 32 တွင် ESET NOD11.04 ကို install လုပ်ရန်ပြနာ
ငါမူကား၊ Linux အတွက် Nod32 ဗားရှင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တယ်။
Desktop Linux စနစ်များတွင် Antivirus (၀ င်းဒိုးကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်) ကိုစနစ်မှန်ကန်စွာအသုံးပြုသင့်သည်။
ရွေးချယ်စရာတွေရှိတာကောင်းတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ငါလုပ်သမျှအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်တဲ့စီးပွားဖြစ်အသုံးချပရိုဂရမ်ကိုသုံးပြီးငါထွက်လာတာကငါ့ system ထဲမှာအမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်နေတယ်။
လျစ်လျူရှုခံရခြင်း၏အန္တရာယ်မှာ GNU / Linux တွင် malware ကူးစက်ခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်လော။ အဘယ်ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်ထို့နောက်လိုအပ်သနည်း
Partner၊ Troll xDDD အတွက်သင့်ကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ GNU / Linux တွင် Malware ကူးစက်ရန်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်ကိုကြည့်ကြရအောင်၊ ၎င်းတို့မှကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အပိုလုံခြုံရေးအတွက်ဘာမကောင်းသနည်း။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့စက်မှစက်တစ်ခုသို့ကျွန်ုပ်တို့သယ်ဆောင်သောကောင်းချီး pendrives များရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် .exe ကို download ပြုလုပ်ပြီး Windows စက်တစ်ခုသို့ပို့ပါကကူးစက်နိုင်ခြေရှိသည်။
ပြတင်းပေါက်သာ .exe နှင့်အတူကူးစက်နေကြသည်နေစဉ်အဘယ်သူမျှမပြproblemနာ
အထူးသဖြင့်ဖိုင်တစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီး ".exe" ကိုထည့်လိုက်ရင်သူကနောက်ထပ်တိုးချဲ့မှုတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာသိရင်သတိထားရမယ်။ ဒါကငါနဲ့တွေ့ရင် "virus virus !!!"
အတိအကျကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းနှင့် malware repository အနေနှင့်ဖြစ်စေတိုက်ခိုက်မှုများအတွက် malware များကိုမောင်းနှင်သောလွှတ်တော်အမတ်များကိုမည်သို့သိရမည်နည်း။ ထို့အပြင် Linux တွင်နေ့တိုင်း malware တိုးပွားလာသည်။
Lol ဒါနဲ့ကျွန်တော်က "မသိဘဲဖြစ်ခြင်း၏အန္တရာယ်မှာ" စတင်ခဲ့သည်။ ဒီဘလော့ဂ်ထဲမှာပဲ GNU / Linux / Unix / ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်၊ file system, virtual memory စသည်ဖြင့်ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်လိုက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ code များပျံ့နှံ့ခြင်းဟာမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ ငါခွင့်ပြုထားပါတယ်ထင်ကြသလော 😉
၎င်းသည်လုံခြုံမှုအပိုမဟုတ်ပါ၊ သင်သီးသန့် application တစ်ခုတင်နေသည်။
အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်သာမာန်အသုံးပြုသူကိုစိတ်မဝင်စားသောအရာဖြစ်သည်။ တစ်နည်းပြောရရင်ငါမင်းတို့အဲ့ဒီအရာတွေကိုစိတ်မ ၀ င်စားနေရင် (ဒါကြောင့်ငါ Nod32, NeroLinux, ဒါမှမဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုကိုမသုံးတာ)
xD ကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်သာမန်အသုံးပြုသူတွေဘာကိုစိတ်ဝင်စားသလဲ၊ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူး
ပုံမှန်သုံးစွဲသူနှင့်လုံခြုံရေးသည် xDDD ဟုမဆိုနိုင်ပါ
Hahahahaha, Unix ကဲ့သို့ hahahahahahahaha အတွက် antivirus ။
Antivirus က Linux အတွက်လား။ Hummmm ကဆန့်ကျင်ကွဲလွဲနေတယ်။ စက်တစ်လုံးကကူးစက်နိုင်တယ်၊ အားလုံးကသင်လည်ပတ်တဲ့ဆိုဒ်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ distro ကိုယုံကြည်ပြီးအဲဒီစာမျက်နှာများကိုမကြည့်ပါကကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်ဟုမထင်ပါ။ အနည်းဆုံး W $ ဖြင့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုရှာမတွေ့သေးသောပရိုဂရမ်များအတွက်ကျွန်ုပ်သုံးစွဲရသောအခါ၎င်းသည်ကူးစက်ရန်မဖြစ်နိူင်ပါ။ ၎င်းနှင့်အီးမေးလ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများကိုအမြဲတမ်းရယူထားသောအသိအကျွမ်းများနှင့်ပူးတွဲဖိုင်များကိုသာရရှိသည်။ ဒါပေမယ့်ဟေး ... ဆေးဆိုင်၌ရှိသကဲ့သို့အရာအားလုံးရှိပါတယ်။
တခါတရံဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးနောက်ခံတွင်အလုပ်လုပ်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားရသည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ပင်မစာမျက်နှာကိုမည်သို့ပြောင်းလဲသွားသည် (သို့) ဘရောင်ဇာတွင်ထူးဆန်းသောဘားများထည့်သွင်းထားပုံကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိဆဲဖြစ်သည်။ Spybot ကကျွန်တော့်ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပေမယ့်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူး။
ဟားဟားဟားမင်းမင်းပြောနေတာကိုငါနားလည်တယ်။ အဲဒါကို Windowsitis hahaha လို့ခေါ်သင့်တယ်
Linux တွင် ၄ နှစ်နီးပါးရှိပြီး malware တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် antivirus ကို install လုပ်ပြီးပြီဖြစ်သည်။
၎င်းသည် Linux အတွက် Nod (ကျွန်ုပ် Avast ပိုနှစ်သက်သည်) ရှိသည်ကိုသိရှိရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
Linux သည် 'ပုံမှန်' ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ကင်းလွတ်သည်ဟူသောအချက်မှာမှန်ကန်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့ကိုမထိခိုက်စေသကဲ့သို့၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်လည်းမပတ်သက်ပါ။ သင်ပြောသည့်အတိုင်း၊ အခြားသူတစ် ဦး ထံအီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့လျှင်သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် windows (boot နှစ်မျိုးဖြင့်) ရှိပြီးသင်က partition တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ဖိုင်များကိုရွေ့လျားနေသည်ဆိုပါကပြaနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖြေကတော့ရိုးရိုးလေးပါ။ သင်၏ပြproblemနာဖြစ်သော ၀ င်းဒိုးကိုဂရုစိုက်ပါစေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ခါတစ်ရံမှာသင်ကိုယ်တိုင်ပြtheနာရှိနေတယ် (ဒါကတစ်ချိန်ကငါ့မှာဖြစ်ခဲ့ဖူးပြီးတဲ့နောက်ငါ Windows ကိုဖယ်ရှားလိုက်တယ်)
မေးခွန်းတစ်ခု - စီးပွားဖြစ်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးပရိုဂရမ်အတော်များများဟာ Linux ကိုဝင်ချင်လာတယ်။ သူတို့က 'resident' အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကြမလား။ ငါထင်တာကတော့ Linux ring ရဲ့ဒီဇိုင်းကြောင့်သူတို့ဒီလိုမျိုးအလုပ်မလုပ်သင့်ဘူး၊ antivirus 'demand on' ကိုသုံးမယ် ... ငါတို့မှာ clamav ရှိပြီးသားလား?
Linux သည်ပုံမှန်ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်သူစိမ်းများအားလက်တွေ့တွင်ခုခံနိုင်စွမ်းမရှိပေ။ Malwares သည်၎င်းတို့သည်အမျိုးမျိုးသောရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ bug များ၏ကျယ်ပြန့်သောသတ္တဝါများဖြစ်သောကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်သော executable ကိုခွင့်ပြုပါက (သို့မဟုတ်) source code ကိုအပြစ်မဲ့သောပရိုဂရမ်တစ်ခုထဲသို့စုစည်းထားပါက၊ Trojan ဒါကြောင့်နောက်ကျောတံခါးကိုအဖြစ်ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Adobe Flash, Java စသည့်ဆော့ဝဲလ်ကိုဂရုတစိုက်အသုံးပြုပါကဗိုင်းရပ်စ်များကူးစက်နိုင်သည့်အန္တရာယ်သိပ်မရှိပါကကျွန်ုပ်တို့မှစက်များကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမှခံရန်အလွန်အမင်းဖော်ထုတ်မည် တီကောင်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘရောင်ဇာကိုမွမ်းမံခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကိုမွမ်းမံခြင်းများမပြုပါကသံသယဖြစ်ဖွယ်ဆိုဒ်များထဲသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းမပြုပါက၊ exploit ကြောင်းအမည်မသိအားနည်းချက်ကိုအသုံးပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ browsers များသို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်ထည့်သွင်းထားလျှင်၊ သူတို့သည်အထူးအခွင့်အရေးများမရရှိလျှင်ပင်သူတို့သည်လုံခြုံစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သကဲ့သို့ စပိုင်ဝဲကျွန်ုပ်တို့အလိုအလျှောက် update လုပ်ရန်ခွင့်ပြုချက်ပေးလျှင် ပို၍ ပင်အရေးကြီးသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝေးလံသောဆာဗာများသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမှန်ကန်စွာ configure မလုပ်ပါကစက်များအားဖမ်းယူရန်လွယ်ကူစေရန်နှင့်သူတို့နှင့်ပူးပေါင်းရန်မလိုလားအပ်သောတောင်းဆိုမှုများနှင့် brute force attack များကို script များဖြင့်အလိုအလျောက်အကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ botnet.
ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောသူသည်စနစ်ထဲခိုးဝင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏လက်ဆောင်များကိုစွန့်ခွာသွားလျှင် Rootkit ၎င်းသည်လျှို့ဝှက်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစနစ်ကိုပျက်စီးစေပြီး၊ အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်းနှင့် user ည့်သည်ကိုပုံမှန်အသုံးပြုသူတစ် ဦး အလားလိုလိုပုံမှန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးလိမ့်မည်။
အကြိမ်နှစ်ခါ Avast! linux အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ ငါ့ကိုအမှားမှားမိစေတယ်။
ကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ကာကွယ်ခြင်းကိုရည်ညွှန်းသောအခါသို့မဟုတ်လျစ်လျူရှုသောအခါသင်၏မှတ်ချက်အချို့ကိုဖတ်ရန်စိတ်ပူနေသည်။ ဤနေရာတွင်အရေးကြီးသည်မှာ Linux တွင် malware ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်အန္တရာယ်များလွန်း။ များစွာသောပလက်ဖောင်းရှိအန္တရာယ်ရှိသည့်ကုဒ်များ……။ အားနည်းချက်များကို Adobe, java ....... ။ Linux ပေါ်မှာလား ??? ဒါပေါ့!!! ဘယ်လိုဆက်ပြီးကြီးထွားနေပုံကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ၊ အခုတော့ငါစိတ်ပူနေတုန်းပဲ။
၎င်းသည်အဆိုးမြင်ရန်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် OS X ကဲ့သို့သောစနစ်များကြောင့်သို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းခြင်းတစ်ခုအမှန်တကယ်မရောက်ရှိခြင်းကြောင့်မဟုတ်တော့ဘဲ၊ သုံးစွဲသူများမည်မျှလုံခြုံစိတ်ချရပြီးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့မည်မျှအသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ malware ၏ခေတ်မီဆန်းပြားမှု။ တစ်ခုခုပြောတာကသူတို့ကငါတို့ကိုအိပ်ပျော်အောင်ဖမ်းမယ်။
အမှန်စင်စစ်၊ မိတ်ဆွေ၊ များစွာသောသူတို့သည်လက်ရှိအန္တရာယ်ကိုမသိကြပါ။ X အကြံဥာဏ်တွင်သိုလှောင်ထားသောအချက်အလက်များသည်လူအတွက်အဖိုးတန်လျှင်ကာကွယ်သင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုလိမ့်မည်။ (ကာကွယ်မှုဟူသောဝေါဟာရသည် AV နှင့်သက်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ)
ClamAV သည် (ပုံမှန်အသိနှင့်အတူ) လုံလောက်သည်ထက်ပိုသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Windows သူငယ်ချင်းများကိုကာကွယ်ရန်။
မင်းငါ့ကိုဘာထိတ်လန့်နေတာလဲကြည့်ရအောင်၊ ဒီဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဟာအခုအချိန်မှာသင့်ကိုကာကွယ်ပေးမှာလား၊ ငါကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတစ်ခုတည်းမှာ CLAM ကိုမကြာခဏဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းဖြစ်ပြီးအမှန်တရားကတော့ဘာမှမထွက်လာဘူးဒါမှမဟုတ်ဗိုင်းရပ်စ်ပြproblemနာမရှိဘူးဆိုတာပါပဲ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်မှာ Linux အတွက်ထိုအချိန်တွင် antivirus မရှိပါ။
သူငယ်ချင်း၊ မင်းက real-time protection ပါတဲ့ antivirus ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးမင်းရဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကတော့ဟုတ်တယ်။ GNU / Linux အတွက် ESET သည်အချိန်နှင့်တပြေးညီကာကွယ်မှုပေးသည်။ ClamAV က၎င်းကိုမပေးနိုင်ပါ၊ သို့သော်၎င်းကို "အတုယူသော" scripts များကိုငါလုပ်နိုင်သည်၊ ငါသည်လည်းနာရီတိုင်း DB ကို update လုပ်ရန် script များရှိသည်။
Windows တွင် ClamWin + ClamSentinel ကိုသွင်းခြင်းဖြင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီကာကွယ်မှုဖြင့် ClamAV ကိုသုံးနိုင်သည်ဆိုလျှင် -
GNU / Linux တွင် ESET ကိုအသုံးပြုလိုသူများအတွက်လည်း (ကျွန်ုပ်မလုပ်ပါ) ၎င်းကိုပြုလုပ်သင့်သည် http://tienda.eset.es/ ESET သည်ဤ OS ကိုမည်သို့စိတ်ဝင်စားသည်၊ Desktop, Business နှင့် Server ဗားရှင်းများမည်သို့ရှိသည်ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။
ဒီ antivirus နှင့် avast ဗားရှင်းနှစ်ခုစလုံး၊ ဗိုင်းရပ်စ်အခြေခံသည်ပြတင်းပေါက်များမှဖြစ်ပြီး၊ ဤကာကွယ်မှုသည် linux ကို USB memory သို့မဟုတ် USB disk ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်တစ်ခုတည်းသာပေးသည်။
ကောင်းပြီ၊ Linux အတွက်စီးပွားဖြစ်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဟာခဏတဖြုတ်ရပ်တန့်သွားပြီ။ ဗိုင်းရပ်စ် (malware) သည် winchot တွင်ဖြစ်ပွားသောရောဂါများနှင့်အလားတူစွာကြီးမားသောကူးစက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်၊ မစိုးရိမ်ပါနှင့်ဆူညံသံများစွာထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဤ antivirus သည် Bill ၏ system ကိုပိုမိုကာကွယ်ရန်အသုံးဝင်သည်။ ကျနော်တို့ Steam ၏ဆိုက်ရောက်ဆောင်ခဲ့သောအရာကိုကြည့်ရှုရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, ငါတို့မြင်လိမ့်မည်။
ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအစစ်အမှန်ရှိပါသလား။ ငါ Gnu / linux အတွက်အခမဲ့သို့မဟုတ်ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ကိုဆိုလိုတာလား။
Open source မှာသင်၌ ClamAV ရှိသော်လည်း GNU / Linux အတွက်အမှန်တကယ်ဗိုင်းရပ်စ်ရှိသလား။
ကောင်းသောညပါ။ ငါ Linux သုံးစွဲသူနှစ်နှစ်လောက်ရှိခဲ့ဖူးပြီး desktop manager အပြောင်းအလဲတွေကကျွန်တော့်ကိုနှာခေါင်းသွေးယိုကျစေခဲ့တယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စိတ် ၀ င်စားပြီး Firefox ကိုသုံးသောသင်အတွက်သင့်တွင်“ Fireclam” ဟု add-on တစ်ခုရှိပြီးသင် clamav တပ်ဆင်ထားလျှင်သင် download ဆွဲသမျှကို (အနည်းဆုံးတိုက်ရိုက် download ဖြင့်) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါ။
malware နှင့် ပတ်သက်၍, ငါ Debian developer တစ်ယောက်၏ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုမှတ်မိသလောက်စဉ်းစားမိသည်။ သူက Trojan များမှအမှန်တကယ်အချိန်တွင်အကာအကွယ်ပေးနိုင်မည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော application တစ်ခုအကြောင်းမေးသောအခါ Debian developer များ (Google translation) နှင့်မတူပါ။
PS စာမျက်နှာပေါ်မှဂုဏ်ယူပါတယ်နှင့်…ဂုဏ်ယူပါတယ် KZKG ^ Gaara !!!
ငါ GNU / Linux _not use_ antivirus ကိုသုံးသလိုပဲ။ : facepalm:
ဤနေရာတွင်ပြနာမှာလုံခြုံရေးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ကွန်ပျူတာများတွင်လုံခြုံရေးဖြေရှင်းချက်တစ်ခုထားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Linux ရှိ malware သည်ပိုမိုတိုးများလာနေသည်။ အကယ်၍ သင် Linux အတွက်ထွက်ပေါ်လာသောရှုပ်ထွေးသော rootkit ကိုမတွေ့ပါကစဉ်းစားရန်မှာစိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများရှိကြောင်း၎င်းတို့သည်အန္တရာယ်ကိုမသိရှိဘဲအရေးကြီးကြောင်းဖော်ပြရန်အရေးကြီးသည်။ Cheers! (ခ)
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုမကောင်းမှုအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။ (လေးနက်တဲ့ဆောင်းပါး။ JSON ကမင်းရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုဘယ်လိုခြိမ်းခြောက်တယ်ဆိုတာ)